tareenka | RayHaber
Wararka tareenka ee hadda socda, wararka tareenka degdega ah, shilalka tareenka iyo wax walba oo ku saabsan tareennada
Xawaaraha Internetka ee Xawaaraha Sare wuxuu ku socdaa Tareennada Ruushka; Barnaamijka Tiknolojiyadda Qaranka ee Ruushka (NTI) wuxuu qorsheynayaa inuu qalabeeyo tareennada Ruushka iyo diyaaradda oo leh xawaare sare. Sida ku xusan warkan Sputniknews; “Saxaafadda Qaranka ee Tikniyoolajiyadda Ruushka [More ...]
Shiinaha, tareenkii ugu horreeyay, oo loo dhisay in looga dhoofiyo dhuxusha waqooyiga ilaa gobollada koonfurta oo lagu dhammeeyo hal go, ayaa si rasmi ah loosoosaaray. Laga soo bilaabo Hole Baoji ee Inner Mongolia ilaa Ji'an, Gobolka Jiangxi [More ...]
Anshaxa Gaadiidka Dadweynaha ee Old Istanbul
Sidaad ogtahay, mudnaanta waxaa la siiyaa kuwa ka dega si ay ugu fududaato gawaarida tareenka dhulka hoostiisa, kaliya maahan raaxada rakaabka, laakiin sidoo kale raaxada rakaabka doonaya inay ka baxaan gaariga. Sidookale degida iyo [More ...]
Tareenka ugu dambeeya ee ka socda dhulka barakada leh: boqol sano oo sawirro ah oo ka socda Makka, Madiina iyo Kaaba ayaa weli laga sii wadaa Bandhig Faneedka Taksim. Sheekooyinka xiisaha leh ee 10 ee sawirada 70 oo lagu soo bandhigi doono ilaa Agoosto [More ...]
Abaabulka Ciidda ee Hantida loo bixinayo Socdaalka YHT: Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa sheegay in muwaadiniinta doonaya inay ku safraan tareen sababta oo ah Ciidda Sanadaha ma aha dhibanayaal iyo inay la kulmaan baahida rakaabka. [More ...]
Wadamada ay la socdaan tareenada ugu dhakhsaha badan adduunka ayaa la aqoonsaday. Xnumx'unc safafka on liiska madaxda Turkey ayaa naasaha Japan. Mid ka mid ah wakaaladaha kormeerka warbaahinta ee ugu sareeya, Ajans Press [More ...]
TCDD, oo bilaabay duulimaadyada dayuuradaha ee Ankara-Kars, ayaa ujeedkiisu yahay in lagu bixiyo laba tareen oo dheeraad ah oo leh sifooyinkaas. Habertürk'ten Olcay Aydilek, sida laga soo xigtay Wasaaradda Gaadiidka, TCDD'ye dalab culus oo loogu talagalay tareenka dalxiiska [More ...]